महिलाले किन पुरुषले भन्दा बढी प्रयोग गर्छन् से”क्स टो’य ? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Intresting/महिलाले किन पुरुषले भन्दा बढी प्रयोग गर्छन् से”क्स टो’य ?
महिलाले किन पुरुषले भन्दा बढी प्रयोग गर्छन् से”क्स टो’य ?
काठमाडौंमा दैनिक औसत ८/९ वटाको दरले से”क्स टो’यको व्यापार हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा पनि से”क्स टो’यको माग बढ्दै गएको छ ।
देशभर भने नौवटा भन्दा बढी से”क्स टो’यका पसल छन् । स्वचालित पे’नि’सदेखि स्त’न, भे’जि’ना म’साजरको सामग्रीलगायतका यौ”न सामग्री नेपालमा उपलब्ध छ । काठमाडौंमा पछिल्लो समय फुल बडीको से”क्स टो”य उपलब्ध नभए पनि पोखरामा भने उपलब्ध छ ।
काठमाडौंमा ११ सयदेखि १२–१३ हजार मूल्यसम्मका से”क्स खेलौना उपलब्ध छन् । नेपालमा क”न्डम हाउसले होलसेलमा से”क्स टो”य बिक्री गर्दै आएको छ । क’न्ड’म हाउसबाटै काठमाडौंबाहिर पनि से”क्स टो”य जाने गरेको छ । नेपालमा चीन, थाइल्यान्ड, जापान, मलेसिया र कोरियाबाट से”क्स टो”य ल्याउने गरिन्छ ।
अनलाइन बिजनेस मेरो सपिङले तीन वर्षदेखि से”क्स टो”यको व्यापार गर्दै आएको छ । मेरो सपिङ पनि पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि दोब्बर संख्यामा से”क्स टो”य बिक्री हुने बताउँछ । मेरो सपिङमा भने अत्यधिक मात्रामा टि’न एज’र्सले से”क्स टो’य’को माग गर्ने गर्छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो परिचय भने राम्रोसँग नखुलाउने गरेको सञ्चालक बताउँछन् ।
भाइवर, फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत पे’नि’स, टा’इटे’निङ जे’ल लगायतका सामग्री मगाउने गर्दछन् । तर, अनलाइनमा यस्ता सामान मगाउनेले आफ्नो नाम सत्य नबताउने मेरो सपिङका सञ्चालक बताउँछन् । नेपालका प्रायः से”क्स टो’य पसलेले होम डेलिभरी नगरे पनि मेरो सपिङको विशेषता भने होम डेलिभरी नै हो ।
व्यवसायी भने से”क्स टो”यको उत्साहप्रद व्यापारचाहिँ नभएको बताउँछन् । तीनदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको से”क्स टो”य अत्यधिक बिक्री हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।